हामीले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन सक्छौ ! कि सक्दैनौँ : डाक्टर शेखर कोइराला
२०७८ जेठ ६ गते ११:३०:०० मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला तेह्रौँ महाधिवेशन पछि कांग्रेस कार्यकर्ताका बीचमा सर्वाधिक खोजिएका र रुचाइएका नेता हुन । कोइराला कार्यकर्ताका बीचमा निकै सरल र सहज लाग्छन् । उनले हरेक विषय र सन्दर्भलाई देश र पार्टीको राजनीतिक जीवनसंग गाँसेर बोल्ने गर्छन् । मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लैजानमा निर्णायक भूमिका खेलेका कोइरालाले बाह्र बुँदे शान्ति सम्झौतामा विशेष भूमिका खेलेका थिए ।
उनले संघीयताको मर्मलाई सरकारले पटक्कै नबुझेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको खरो आलोचक कोइराला ओली सरकारलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हो ,भने लोकतन्त्र समाप्त हुन सक्ने दावी गर्दै आएका छन् । डाक्टर कोइरालासंग कांग्रेस राजनीति , सरकारको छिनाझपटी र कोरोना संक्रमणमाथि केन्द्रीत रहँदै खुलामञ्चका लागि ठाकुर बेलवासेले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ , उक्त संवाद :
कोरोना महामारीको यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ ?
हामी विपक्षमा छौ । यस्ता महामारीमा काम गर्ने सरकारले हो । प्रतिपक्षीका नाताले नागरिकका पक्षमा गरिएका कामका लागि सरकारलाई साथ दिने हो । सहयोग गर्ने हो । । सरकारले कांग्रेससंंग अहिले देखिएका कुनै पनि विषयमा सहकार्य गर्न खोजिरहेको छैन ।
हामहिरुले ७७ वटै जिल्लाका साथीहरुसंग जूम बैठक गरिकन अवस्था कस्तो छ? बुझ्ने काम गरेका छौँ । यसमा सिंगो कांग्रेस पार्टी र विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता साथीहरु सहभागी हुनुहुन्छ । म त पार्टी र व्यक्तिगत तर्फबाट हरेक जिल्लाका साथीहरुसंग सम्पर्कमा छु ।
कांग्रेसले जितेका सातै वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरुका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरुसंग बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । ती बैठकहरु कोरोना संक्रमण र सास्तीबाट आमनागरिकलाई जोगाउन , स्थानीय सरकार र कांग्रेसले के गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रीत थिए ।
सरकारले कमिसन नमिलेका कारण खोप ल्याएन रे ! जस्ता कुरा सार्वजनिक भएका छन् । सरकार यस्ता कुरामा जवाफदेही छैन ।
ती बैठकबाट के पायौँ ,भने केही ठाउँहरुमा ठीकै भएका छन् , कामहरु । तर अधिकाँश जिल्लाहरुमा न त कोरोना परीक्षण भएको छ । न त आइसोलेसन केन्द्र छन् । कति ठाउँमा भेन्टिलेर छ , अक्सिजन छैन । कति ठाउँमा अक्सिजन छ , आइसीयू छैन् । अझ कति ठाउँमा भेन्टिलेटर छ , चलाउने जनशक्ति छैन । यस्तो अवस्थाबाट देशमा कोरोना संक्रमणको उपचार चलिरहेको छ ।
सरकार के कुरामा अलमलिएको छ , मैले त बुझ्न सकेको छैन् । खोप ल्याउने कुरामा पनि सरकार अलमलिएको देखियो । अझ खोप माथि कमिसनका कुरा आए ।सरकारले कमिसन नमिलेका कारण खोप ल्याएन रे ! जस्ता कुरा सार्वजनिक भएका छन् । सरकार यस्ता कुरामा जवाफदेही छैन ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको केही पनि भूमिका हुँदैन त ?
मैले त्यसो भनिरहेको छैन । कांग्रेसको भूमिका छ । हामी गर्दै पनि छौ । जुनजुन स्थानीय तहमा कांग्रेसले जितेको छ । ती ठाउँहरुमा साथीहरुले सक्दो काम गरिरहनु भएको छ । जहाँ नेपाली कांग्रेसले जितेको छैन । ती ठाउँहरुमा हामीहरुले प्रयास मात्रै गर्ने हो । प्रयास गरिरहेका छौँ । साथीहरु लागि रहनु भएको छ । अझ मैले त हरेक जिल्ला र क्षेत्रहरुमा कांग्रेसकै पहलमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउँ भनिरहेको छु ।
कतिपय स्थानमा त साथीहरुले बनाइरहनु भएको पनि छ । हाम्रा यी कामले पनि सरकारलाई नै मद्दत पुग्ने हो ।हामीहरुले सरकारलाई घचघच्याउने हो । कन्ट्रयाक ट्रेसिङ र पिसीआर आवश्यक छ । यी दुवै कुरा छदैँ, छैन भने पनि हुन्छ । कतिपय जिल्लाहरुमा यी दुवै कुरा शून्य छन । यसका लागि पनि हामीले सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ ।
ओली सरकारले त संघीयताको अपमान मात्रै गर्दै आएको छ ।
कोरोनाको उपचारका लागि अर्को महत्वपूर्ण भनेको खोप हो । यस बेला नेपाललाई खोप अत्यन्तै जरुरी छ । कुन देशले अनुदानमा दिन्छ ! भनेर खोज्ने र पर्खिने काम गर्नु मूर्खता हो । सरकारले खोप खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ । समयमै सम्पूर्ण नागरिकलाई नि:शुल्क लगाइदिनु पर्छ । खोप किन्ने इच्छाशक्ति सरकारले राख्नु पर्यो ।सरकारसंग पैसा पनि छ ।
खोपमा कमिसन नमिलेका कारण सरकारले खोप ल्याएन भन्ने समाचार पढ्नु परिहेको छ । नागरिक उपचारका अभावमा मरिरहेका छन् । खोपको अभावमा संक्रमण दिनदिन फैलिएको छ । कोरोनाको महामारीमा खोपमा कमिसन खाने ! यो कस्तो सरकार हो ? यस्ता कुरामा नेपाली कांग्रेसले ले विरोध गर्ने हो । राम्रा कामका लागि सरकारलाई दवाव दिने हो । कोरोना उपचारमा सरकारले राम्रा काम गर्न खोज्छ, भने कांग्रेसले साथ , सहयोग गर्नुपर्छ । गरिरहेको पनि छ ।
डाक्टरसाब तपाई आफै वरिष्ठ चिकित्सक । तपाईसंग सरकारी अस्पतालमा काम गरेको लामो अनुभव पनि छ । अझ सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा वसेर व्यपस्थापकीय अनुभव पनि तपाईले लिनु भएको छ । सामान्य अवस्थामा त सरकारी अस्पतालले राम्रो काम गरेका हुँदैनन्। अझ यो महामारीमा सरकारी अस्पतालसंग के आशा गर्न सकिएला ? सरकारी अस्पतालहरु सरकारको निर्देशन मात्रै कुर्ने अवस्था छ । के भन्नु हुन्छ ?
तपाईले भनेको जस्तै पनि होइन । मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थालाई राम्रो बनाउनमा सरकारी अस्पतालको भूमिका छैन् ,भन्नु मिल्दैन । तर अपेक्षाकृत पक्कै पनि छैन् । दोष सरकार कै छ । हामीले संघीयता ल्यायौं तर संघीयताको मर्मलाई बुझेनौ । अझ ओली सरकारले त संघीयताको अपमान मात्रै गर्दै आएको छ ।
संघीयताको मर्म अनुसार संघीय सरकारले काम गरेको छैन् । कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा सबै स्थानीय सरकारहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा कोरोना उपचार सम्बन्धि राम्रा कामहरु गरेका थिए । स्थानीयतहमा भएका सरकारी अस्पतालाई सुधार गर्ने । आइसोलेसन केन्द्र बनाउने जस्ता कामहरु स्थानीयतहमा भएका थिए । विकासका कामहरुलाई थाती राखेर भए, पनि कोरोना उपचारमा स्थानीयतहहरु लागेका थिए ।
हामीले १०० शैयाको अक्सिजन र भेन्टिलेर सहितको सबै सुविधाको व्यवस्था गरेर एक किसिमको अस्पताल जस्तो केयर सेन्टर खोल्यौँ ।
पीसीआर टेस्ट गर्ने । आइसोलेसन बनाउने र क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्ने काममा स्थानीयतहरु निकै सक्रिय थिए । त्यसबेला त स्थानीय सरकारले राहत समेत बाढ्ने काम गरेका थिए । निकै राम्रो काम भएको थियो । संघीय सरकारले यी सबै कामको शोधभर्ना गरिदिने आश्वासन दिएको थियो । सरकारले आफैले दिएको आश्वासन पुरा गर्न सकेन । शोधभर्ना गरिदिएन । यसबाट स्थानीय सरकार निराश भए । संघीय सरकारलाई जनता र संघीयताप्रति कुनै चिन्ता छैन । सरकार उत्तरदायी नबने सम्म सरकारी अस्पतालले मात्रै राम्रो काम गर्न सक्दैनन् ।
डाक्टर साहब , यस्तो बेला संघीय सरकारको मुख ताक्नु भन्दा आआफ्नो ढंगबाट काम गरे पनि हुन्छ होला । यस घडी कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले के गरे ? भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने !
ठीक भन्नु भयो । हामी नागरिकका पक्षमा काम गर्ने भनेरै राजनिितमा आएका हौँ । यसैले हाम्रा कामकारवाहीका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्छ । यो बेला सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो काम गर्ने हो । मैले अघि भनेका कुरा सैेद्धान्तिक पनि हुन । ठूलो विपदमा स्थानीय सरकार र तहलाई संघीय सरकारले सहयोग र साथ दिनु पर्छ ।
ओलीले संविधानलाई लत्याउनु भयो । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु भयो । उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजनु भयो । सक्नु भएन । प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुभयो । दुर्भाग्य फेरी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । ओलीले संविधानमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउनु भयो । हामीले संविधान यसका बारेमा दूरदर्शिता अपनाउन सकेनछौँ । हामी चुकेछौँ ।
अहिलेको बेला विपदको बेला हो । स्थानीय सरकारसंग बजेटको अभाव हुनसक्छ । उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले साथ दियो, भने काम त जनताका लागि हुने हो नि !
अब डाक्टर शेखरले के गर्यो ? भन्ने सन्दर्भमा , म यस समयमा पनि नागरिकसंगै छु । यस्तो बेला भौतिक रुपमा जान नसकिएला । तर विभिन्न माध्यमबाट म नागरिकका बीचमा पुगेको छु । उहाँहरुलाई परेको दु:ख , पीडामा मैले सक्दो साथ र सहयोग गरेको छु । मैले गर्ने सहयोग भनेको उपचारका लागि सहजता खोजिदिने हो । अझ सिंगो देशका सन्दर्भमा भन्नु पर्दा मैले सरकारलाई दवाव दिने हो । मेरै पार्टी कांग्रेस जिम्मेवार भएन, भने पनि खबरदारी गर्ने हो । यी काम मबाट भएका छन् । कोरोनाको उपचारमा सरकार लाचार बनिरहेको कुरा मैले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएको छु ।
तपाईले अझ देखिने भौतिक कामको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो, भने पनि त्यस्ता मैले गरेको छु । यस्ता बेला आफुले गरेका कामको आफै चर्चा गर्न मलाई मन छैन् । आफ्ना कामका बारेमा भन्दै हिड्नु पनि राम्रो होइन । तथापि तपाईले सोध्नु भयो । बिराटनगरमा कोरोनाको पहिलो लहरमै मैले बुद्धिजिबी , स्थानीय नागरिक र नगरपालिकाका प्रमुख , उपप्रमुख लगायतलाई एककृत गराएँ । त्यही एकतृत भएको शक्तिले नागरिक केयर सेन्टर खोल्यो ।
हामीले १०० शैयाको अक्सिजन र भेन्टिलेर सहितको सबै सुविधाको व्यवस्था गरेर एक किसिमको अस्पताल जस्तो केयर सेन्टर खोल्यौँ । हामीले यो सञ्चालन गर्दै थियौँ । त्यसैको आडमा प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल खोल्यो । सरकारले पनि अस्पताल खोल्यो । ठीक हो । राम्रो हो । तर आज सरकारले खोलेको कोभिड अस्पताल बन्द भएकोे अवस्थामा छ ।
पुर्नस्थापना भएको संसदमा देशका प्रधानमन्त्री , कार्यकारी प्रमुख एक पटक पनि जानु भएन । यो भन्दा बिडम्बना देशका लागि के हुन्छ?
सरकारलाई लाग्दै छ कि देशमा केही भएकै छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको सहभागितामा गत जेठ २ गते आइतबार सिंहदरबारमा सीसीएमसी बैंठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बल्ल अहिले आएर कोरोनाको यत्रो कहर , महामारी होला भन्ने मलाई त लागेको थिएन भन्नुभएछ । र उहाँले भन्नु भएछ- 'नेपालीहरुमा यूमिनिटी पावर छ भन्ठानेको थिए । त्यो होइन रहेछ ।' उहाँले बल्ला कोरोना कहरलाई बोध गर्नु भएछ । अब सरकारले केही गर्छ, कि भन्ने आश गरौँ ।
कोरोना कहरको बोध हुन ढिला भएन ?
व्यपस्थापकीय कमजोरी भयो । अलिकति विचार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने, अझै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । धेरैको घरमा अहिले कोरोना संक्रमण भएको जस्तो देखिन्छ । अब कोरोना संक्रमण नभएका मानिस कहाँ जाने । कम्तीमा कोरोना भएका मानिसहरुलाई त आइसोलेसनमा राख्नु त पर्यो । संक्रमित व्यक्ति घरमै वसेर सबै सदस्यलाई सार्न थाल्यो, भने के अवस्था हुन्छ । यसका बारेमा सरकार अझै पनि मौन छ । यसलाई व्यवस्थापकीय कमजोरीका रुपमा हेर्नु पर्छ । यो भनेको सरकार कोरोना संक्रमणप्रति गम्भीर छैन।
डाक्टरसाब कोरोनाले गम्भीर रुप लिदै गर्दा दलहरु सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमा देखिए , यसलाई कसरी हेर्ने?
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरे पछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापन गरिदियो । पुर्नस्थापना भएको संसदमा देशका प्रधानमन्त्री , कार्यकारी प्रमुख एक पटक पनि संसदमा जानु भएन । यो भन्दा बिडम्बना देशका लागि के हुन्छ?
संसद चलिरहेका बेलामा प्रधानमनत्री ओलीले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु भयो । ओलीले संविधानलाई लत्याउनु भयो । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु भयो । उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजनु भयो । सक्नु भएन । प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुभयो । दुर्भाग्य फेरी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । ओलीले संविधानमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउनु भयो । हामीले संविधान यसका बारेमा दूरदर्शिता अपनाउन सकेनछौँ । हामी चुकेछौँ ।
जब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहेन त्यस पछि हामीहरुले लोकतन्त्र र संविधान बचाउनका निम्ति जसपालाई अगाडि सार्नु पर्ने थियो ।
डाक्टरसाब संविधान बनाउँदा तपाईहरु चुक्नु भएको एउटा सन्दर्भ होला । तर संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्ति नै पुनः प्रधानमनत्री बन्नु भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लज्जाको बिषय पनि त होला, नि होइन ?
कांग्रेसले ओलीलाई विश्वासको मत दिने कुरै थिएन । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो , विपक्षीको धर्म पनि हो- विपक्षमा मत हाल्ने । यो सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन । र दिनु पनि हुँदैन । जसले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ , उसैलाई हामीले कसरी समर्थन गर्छो ? कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ ।
लोकतन्त्र माथि धावा बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार बाहिर राख्न नसक्नु अर्को बिडम्बना हो । मैले व्यक्ति ओलीको कुरा गरेको छैन् । प्रवृत्तिको कुरा गर्दै छु । लोकतन्त्र र संविधानको कुरा गर्दै छु ।
तर प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण सुनियोजि ढंगबाट संसदमा पुग्नु भएको रहेछ । उहाँको राजनीतिक चालवाजीका अगाडि कांग्रेस निरीह बनेको , कांग्रेस असफल बनेको हो कि होईन ?
कांग्रेस निरीह बनेको होइन । कांग्रेस असफल बनेको पनि होइन । संसदीय पदद्तीमा संख्याको खेल हुन्छ । तपाईहरुले विचार गर्नु पुस ५ गते जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो । यस पछि यो घटनालाई लिएर सबै दलहरुमा केही न केही विवादहरु आउँदै गए ।
संसद विधटनलाई असंवैधानि र अलोकतान्त्रिक हो ,भन्नेमा सबैको एक मत थियो । तर यस प्रकरणका बारेमा भने सबै पार्टीमा अन्योल थियो । अन्तरविवाद थियोे ।
कांग्रेसभित्र हामीले संसद पुर्नस्थापन हुनुपर्छ भन्यौं । सभापति देउवाजीले निर्वाचन भन्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीले पुर्नस्थापनको कुरा गर्नुभयो । त्यही पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले निर्वाचन भन्नुभयो । एमाले भित्रै पनि माधव नेपाल समूहले पुर्नस्थापना भन्नुभयो । ओलीजीले त विघटन नै गरिहाल्नु भयो ।
वास्तवमा संसद विघटनको विवादको साइकल अझै पुरा भएको छैन् । संसदमा विश्वास \_ अविश्वासको खेलमा कांग्रेसले केही भूमिका खेल्यो । त्यो राम्रै छ । तर पद मुक्त भएका प्रधानमनत्री ओली नै फेरी प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि कांग्रेस चुक्यो ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको अधिवेशनका बारेमा कुरा उठाउनु नै दुर्भाग्य हो । यो गम्भीर बिषय पनि हो ।प्रधानमन्त्री संविधान भन्दा माथि हुन खोज्ने?
कांग्रेसले के गर्नु पर्ने थियो ?
तपाइँले पछिल्ला दिनहरुमा जसपाको नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव गरिहनु भएको छ , तपाईको यो प्रस्तावमाथि कांग्रेस भित्र वहस भयो कि भएन ?
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गर्यो । यो निर्णय ठीक थियो । तर जब हाम्रो नेतृत्वको सरकार नबन्ने बुझिसके पछि , हामीहरुले लोकतन्त्र बचाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । त्यो पहल भएन । यसबेला जसपालाई अगाडि बढाएर लोकतान्त्र र संविधान मिच्दै गर्नुभएका ओलीलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन सकिन्थ्यो । कांग्रेसले यसका लागि पहल गर्न सकेन ।
लोकतन्त्र बचाउन पहल गर्न कांग्रेसभित्र कसले छेक्यो ? बाधक को ?
एकजना कसैलाई दोष नदिऔँ । पार्टीको कुरा हो । सिंगो पार्टीलाई जसपअजस जान्छ । यसमा व्यक्ति या समूह भन्ने कुरा आउँदैन । नेपाली कांग्रेस त लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो नि !
लोकतन्त्र नै कांग्रेसको प्राण हो । जब लोकतन्त्रमाथि नै खेलवाड हुन्छ , भने कांग्रेसले सहन सक्छ ? या सहन मिल्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उलंघन गर्नु भयो । उहाँले लोकतन्त्र मास्दै हुनुहुन्छ । अनि फेरि उहाँलाई नै सरकारमा जान दिने? यो त भएन ।
संसदको पुर्नस्थापन त, अब संविधान अनुसार अगाडि बढ , भनेर पो भएको हो । कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान बचाउनका लागि अन्य दलहरुबाट अझ जसपाबाटै सरकार बनाउ भनेर भनेको भए ,नेपाली जनताले हामीहरुलाई ठीब गर्यो भन्ने थिए ।
तपाईँले जसपाको नेतृत्वको सरकारको कुरासंगै महन्थ ठाकुरको नामै लिएर प्रस्ताव गर्नु भएको छ ,यसको कारण ?
संविधानले दिएको अवधिलाई हामीले टार्यौ , र पार्टीको अधिवेशन गर्न सकेनौँ ! भने के आवस्था आउँछ , सोचौँ । कस्तो सन्देश जान्छ सोचौँ ।
यहाँ निर गलत बुझाई छ । र मैले कुनै व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन् । यो गलत कुरा भइरहेको छ । यस कुराको भ्रममा नपर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । कतिपय साथीहरुले मलाई भन्नु भएको पनि छ - 'तपाईले यस्तो नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो ।'
यहाँ मैले कुनै व्यक्तिका बारेमा कुरा गरिरहेको छैन । हामीले संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्छौ कि सक्दैनौँ ? सवाल यो हो । भोलि ओलीजी नै विधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने ! उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्नुहुन्छ । पुस पाँच गते पनि गरिसक्नु भएकै हो । ओलीजीले घोषणा गरेको निर्वाचन कुनै कारणले हुन सकेन भने ! त्यस बेला संविधान के हुन्छ ? यसका बारेमा हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ ।
भनेको नेपाली राजनीति ,संविधान र लोकतन्त्र थप अन्योमा छन ?
हो नेपाली राजनीति थप अन्योल र जटिलता तर्फ गईरहेको छ । संविधानको कुरा हामी सबैले देखिरहेका छौँ । ओलीजीले के मात्रै गर्दैहुनुहुन्न , संविधानमाथि । लोकतन्त्रका बारेमा भन्दा त ओलीजीले समाप्त पार्नु भयो भने पनि हुने अवस्था छ ।
यही बीचमा कांग्रेस पनि जटिल अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेसका हरेक कार्यसमितिहरु वैधानिक छैनन् । अझ भदौ देखि त सिंगो कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण वैधानिकता गुमाउँदै छ ! अनि ...
ठाकुरजी तपाईले ठीक भन्नु भयो । भदौ भित्र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन भईसकेन भने , पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । पार्टीलाई यो अवस्थामा पुग्न नदिनका लागि अहिले हामीहरुका बीचमा व्यापक छलफलहरु भईरहका छन् । जूम बैठक गरेर । साथीहरुसंग भेटेर हामीहरु छलफलमा व्यस्त छौँ । समय परिस्थितीका कारण कुनै न कुनै 'मोडालिटी'बाट अधिवेशन हुनु जरुरी छ । होइन भने कांग्रेसको वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्दै छ । यो गम्भीर कुरा हो ।
यो कुरालाई पार्टी सभापतिले बुझ्नु भएको छ, कि छैन ?
पार्टीको वैधानिकता माथि हामी भन्दा गम्भीर सभापति नै हुनुपर्छ । हुनुहुन्छ पनि । चार वर्षमा हुनुपर्ने अधिवेशन एक वर्ष लम्ब्याएयौँ । थपेको समयमा पनि अधिवेशन भएन। संविधानले दिएको अवधिलाई हामीले टार्यौ , र पार्टीको अधिवेशन गर्न सकेनौँ ! भने के आवस्था आउँछ , सोचौँ । कस्तो सन्देश जान्छ सोचौँ ।
काग्रेस वैधानिकताको प्रश्नमाथि गुज्रदैछ । गत सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमनत्री ओलीले कांग्रेसले पहल गरेमा कांग्रेसको अधिवेशन सार्न सक्छौँ । सकिन्छ । भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री संविधान भन्दा माथि हुन खोज्ने? हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बिषयमा यसरी बोल्ने ? उहाँले आफुलाई के सोच्दै हुनुहुन्छ ? सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको अधिवेशनका बारेमा कुरा उठाउनु नै दुर्भाग्य हो । यो गम्भीर बिषय पनि हो ।
प्रधानमनत्रीको यो गम्भीर अभिव्यक्तिप्रति हाम्रा सभापति देउवा मौन वसनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो ।
प्रधानमनत्री ओलीले जे पनि गर्न खोज्ने ? लोकतन्त्र र संविधान मिचेर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ ? , हेक्का राख्नु पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाका अभिव्यक्ति शंकास्पद लाग्छन् , हो ?
हो । देखिन्छ त्यस्तै । एउटा पार्टीको अधिवेशनका बारेमा प्रधानमनत्रीले सर्वदलीय बैठकमा कुरा उठाउनु दुर्भाग्य भएन? अझ मिलाउँन सकिन्छ रे ! के भनेको ? आफै संविधान बनाउने आफै मिच्ने । आफै च्यात्ने । समयमा अधिवेशन गराउन नसकेका सभापतिको उपस्थितिमा प्रधानमनत्री ओलीले केका आधारमा कांग्रेस अधिवेशनको कुरा उठाउनु भयो , यो गम्भीर र आपत्तीजनक छ । संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार अहिलेका प्रधानमनत्रीले राख्नुहुन्छ ? संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ संसदको सदस्यले आवश्यकता पर्छ ।
लोकतन्त्र नै कांग्रेसको प्राण हो । जब लोकतन्त्रमाथि नै खेलवाड हुन्छ , भने कांग्रेसले सहन सक्छ ?
संबैधानिक परिषदमा छ जना हुनु पर्नेमा तीनजना भए पनि हुने बनाईदिनु भयो ओलीजीले । प्रधानमनत्री ओलीले जे पनि गर्न खोज्ने ? लोकतन्त्र र संविधान मिचेर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ ? , हेक्का राख्नु पर्दैन । यस्तै कारणले उहाँलाई प्रधानमनत्रीबाट हटाउनु पर्छ भनिएको हो ।
कांग्रेस कार्यकर्ताहरु सभापति देउवा र प्रधानमनत्री ओलीका बीचमा साँठगाँठ छ, भनिरहेका छन् । यसमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ ?
सत्य के हो, थाहा भएन । संबैधानिक परिषदको बैठकमा सभापति देउवाजी जानु भएन । तर नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायहरुमा आउनु भएको छ । यसले देउवा र ओलीका बीचमा साँठगाँठ छ । उहाँहरु शंकाको घेरामा हुनुहुन्छ ।सभापति देउवाका कार्यशैलीलाई हेर्दा,उहाँको साँठगाँठ ओलीसंग छैन्,भन्न सकिदैन । जनताले यी कुरा बुझ्दैनन् भन्ने नसोचौँ ।
तपाईँ अहिलेको बिषम् अवस्थामा पनि कार्यकर्ताका बीचमा पुग्दै हुनुहुन्छ ?
सम्भव भएका ठाउँहरुमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर साथीभाइहरु भेटेको छु । अहिलेको अवस्था त भिन्न छ । सम्भव नभएका ठाउँहरुमा जूम लगायतका माध्यमहरुबाट म साथीहरुका बीचमा छु । टेलिफोन गरेर होस् या अन्य माध्यमबाट म साथीहरुसंग पार्टीका बिषयमा छलफलमै छु ।
अबको कांग्रेस नेतृत्वका लागि कार्यकर्ताका बीचमा तपाई सर्वाधिक चर्चा र वहसमा हुनुहुन्छ । पछिल्ला समयमा कार्यकर्ताको तपाई माथिको मानसिकता कस्तो पाउनु भयो ?
हामी सबै यति बेला बढो कठोर समयमा छौँ । आफै संक्रमित भएको , आफन्तहरु वित्नु भएको अवस्था छ । यो बेला अति गम्भीर बेला छ । तर पनि कांग्रेसको अधिवेशनका बारेमा साथीहरु अति चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो पीर छ ।
संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार अहिलेका प्रधानमनत्रीले राख्नुहुन्छ ?
मैले त यसबेला उहाँहरुको सञ्चो -विसञ्चो र कुनै समस्याका बारेमा मात्रै कुरा गर्ने गरेको छु । साथीहरु मेरा प्रति हिजो जसरी आउनु भएको थियो । मलाई जसरी विशस गरिहनु भएको थियो । आज पनि उत्तिकै विश्वास गर्दै रहेको मैले अनुभव गरेको छु । गाउँगाउँका साथीहरु कांग्रेसप्रति चिन्तित हुनुहन्छ । उहाँहरुको मेराप्रतिको साथ र विश्वास अझ बढेको पो बुझ्दै छु ।